အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ နောကျထပျ ခွလှေမျးက ဘာဖွဈမလဲ? - SPORTS MYANMAR
အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ နောကျထပျ ခွလှေမျးက ဘာဖွဈမလဲ?
အောငျလ အနျဆနျး နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျကတော့ ပွီးဆုံးသှားခဲ့ပါပွီ။ ဖီလဈပိုငျသားတှရေဲ့ ဟီးရိုးကွီး ဖွဈတဲ့ ဗီရာဟာ ဒီပှဲမှာ အောငျလ ကို အဘကျဘကျက ယှဉျပွိုငျနိုငျခွငျး မရှိပဲ ထိုကျထိုကျတနျတနျ အရှုံးပေးလိုကျရတာ ဖွဈတဲ့အပွငျ ၊ အောငျလ ကို တကယျ့ ခနျြပီယံ အစဈအမှနျ ဖွဈကွောငျး သူကိုယျတိုငျ ထောကျခံ ခြီးကြူးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဖီလဈပိုငျ နိုငျငံဟာ ဒီပှဲအတှကျ အောငျပှဲခံဖို့ အကွီးအကယျြ ပွငျဆငျထားခဲ့တာ ဖွဈပွီး ရုပျသံထုတျလှငျ့ကိုတော့ လုပျငနျး နှဈခုက တဈပွိုငျနကျ ၀ယျယူပွီး ၊ တဈနိုငျငံလုံး အားပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သို့သျော သူတို့ရဲ့ တှကျကိနျးဟာ ထငျထားသလို ဖွဈမလာခဲ့ပဲ ၊ ဖီလဈပိုငျ ဖိုကျတာတှဟော ခနျြပီယံလုပှဲတှေ အားလုံးမှာ အရှုံးတှေ နဲ့သာ ရငျဆိုငျရငျး အိမျပွနျသှားခဲ့ရပါတယျ။
မွနျမာ့ သူရဲကောငျးကွီး အောငျလ အနျဆနျး ကတော့ ဗီရာ ကို အနိုငျယူ ပွပွီးမို့ ၊ နောကျထပျ သူ့ရဲ့ ပွငျဆငျမှုက ဘာတှေ ဖွဈမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ပွနျလညျ ဖွကွေားရမှာတော့ မဈဒယျဝိတျ တနျးက သူ့ရဲ့ ရှခေါးပတျဆု ကို စိနျချေါခငျြတဲ့ သူတှတေိုငျးကို ရငျဆိုငျ ထိုးသတျဖို့ အသငျ့ပဲလို့ ထုတျဖျော ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ ကနြျောတို့ ပရိသတျတှေ အနနေဲ့ နောကျထပျ အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ ခနျြပီယံလုပှဲဟာ မဈဒယျဝိတျတနျးမှာ မွငျတှရေ့ဖှယျ ရှိနပေါတယျ။ ကခငျြသားကွီး ကတော့ ဒီပှဲမှာ ထိခကျြက သိပျပွီး မရှိလိုကျတာကွောငျ့ ၊ အမရေိကားကို ပွနျရောကျတဲ့ တဈပွိုငျနကျ ၊ ဒဏျရာ အခြို့ကို ကုသရငျး ခကျြခွငျး လကေ့ငျြ့ခနျး ပွနျဆငျးမယျလို့ ဖှငျ့ဟ သှားခဲ့သလို ၊ နောကျထပျ ထိုးသတျမယျ့ ပှဲစဉျတှကေိုလဲ ဒီဇငျဘာ (သို့) ဇနျနဝါရီ လထဲမှာ ထိုးသတျသှားခငျြတယျလို့ ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ပွောဆိုမှုကွောငျ့ One Championship ဥက်ကဌကွီး ခကျြထရီ ကတောငျ ပွုံးပွသှားခဲ့ပွီး ၊ ဒီလို ဖိုကျတာမြိုး နဲ့ လကျတှဲခှငျ့ရတာ သူ့အတှကျ အရမျးကို ကံကောငျးတယျ ဆိုတဲ့ အကွညျ့တှေ နဲ့ တုနျ့ပွနျသှားခဲ့ပါတယျ။
သို့သျော စဉျးစား စရာ ကောငျးတာ ဟဲဗီးဝိတျတနျး က ခနျြပီယံ ဆငျးထိုးတာတောငျ2ခြီနဲ့ အပွတျ ဖွတျထားပွတဲ့ အောငျလ အနျဆနျး လို ဖိုကျတာမြိုးကို ဘယျသူက မဈဒယျဝိတျတနျးမှာ စိနျချေါရဲမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးက စိတျဝငျ စားစရာပါ။
ယခငျ စိနျချေါပှဲတှေ တုနျးကလဲ ဟာဆီဂါဝါ က နှဈကွိမျ ၊ အရှအေ့လယျပိုငျး မှာ မငျးမူနတေဲ့ ခရာကီ က တဈကွိမျ လာစမျးကွပမေယျ့ ၊ အောငျလ ကို အနိုငျယူပွဖို့ က ဘယျလိုမှကို နီးစပျမှု မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ One Championship အနနေဲ့ ဒီတဈခါ အောငျလ ထိုးခငျြတဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျး က ပွိုငျဘကျကို ရှာရတာ အခကျအခဲတှေ အနညျးငယျတော့ ရှိမယျ ထငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အောငျလ ရဲ့ နရောမရှေး ၊ ကှငျးမရှေးပဲ နိုငျပှဲ ဆကျနတေဲ့ အရှိနျအဟုနျကိုလဲ ပွိုငျဘကျတိုငျးက စိုးရိမျနကွေမှာပါ။ ဒါကွောငျ့လဲ အောငျလ အနျဆနျး ဟာ အာရှ ရဲ့ ပွိုငျဘကျကငျး ဖိုကျတာ တဈယောကျ အဖွဈ သတျမှတျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
One Championship ဟာ ဒီဇငျဘာလ ထဲမှာတော့ Mark of Greatness အမညျ နဲ့ မလေးရှား နိုငျငံက ဘူခဈဂလြီ မှာ နောကျထပျ ပွိုငျပှဲ တဈခု ကငျြးပဖို့ စီစဉျထားပွီး ၊ အကယျ၍ ဖိုကျတာ ပွိုငျဘကျ ပျေါလာခဲ့တယျ ဆိုရငျ အောငျလကတော့ အဲဒီပှဲမှာလဲ ထိုးခငျြတယျလို့ ထုတျဖျော ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ဗီရာကို အနိုငျယူတဲ့ ပှဲအပွီး အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ အောငျမွငျမှု နဲ့ ကမ်ဘာကြျော သတငျးဌာနတှေ ဖွဈတဲ့ ESPN , Yahoo Sports, The Sun တို့က ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ နဲ့ တဈခမျးတနား ဖျောပွခဲ့သလို ၊ MMA အသားပေး သတငျးဌာနတှကေလဲ ခြီးကြူးဂုဏျပွုစကားပေါငျး မြားစှာ နဲ့ ဒီကနမှေ့ာ ရေးသား ဖျောပွလြှကျ ရှိနပေါတယျ။
အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းက ဘာဖြစ်မလဲ?
အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဖီလစ်ပိုင်သားတွေရဲ့ ဟီးရိုးကြီး ဖြစ်တဲ့ ဗီရာဟာ ဒီပွဲမှာ အောင်လ ကို အဘက်ဘက်က ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်း မရှိပဲ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အရှုံးပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ၊ အောင်လ ကို တကယ့် ချန်ပီယံ အစစ်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင် ထောက်ခံ ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံဟာ ဒီပွဲအတွက် အောင်ပွဲခံဖို့ အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ကိုတော့ လုပ်ငန်း နှစ်ခုက တစ်ပြိုင်နက် ၀ယ်ယူပြီး ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အားပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ရဲ့ တွက်ကိန်းဟာ ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ပဲ ၊ ဖီလစ်ပိုင် ဖိုက်တာတွေဟာ ချန်ပီယံလုပွဲတွေ အားလုံးမှာ အရှုံးတွေ နဲ့သာ ရင်ဆိုင်ရင်း အိမ်ပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့ သူရဲကောင်းကြီး အောင်လ အန်ဆန်း ကတော့ ဗီရာ ကို အနိုင်ယူ ပြပြီးမို့ ၊ နောက်ထပ် သူ့ရဲ့ ပြင်ဆင်မှုက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်လည် ဖြေကြားရမှာတော့ မစ်ဒယ်ဝိတ် တန်းက သူ့ရဲ့ ရွှေခါးပတ်ဆု ကို စိန်ခေါ်ချင်တဲ့ သူတွေတိုင်းကို ရင်ဆိုင် ထိုးသတ်ဖို့ အသင့်ပဲလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ နောက်ထပ် အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ ချန်ပီယံလုပွဲဟာ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာ မြင်တွေ့ရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ကချင်သားကြီး ကတော့ ဒီပွဲမှာ ထိချက်က သိပ်ပြီး မရှိလိုက်တာကြောင့် ၊ အမေရိကားကို ပြန်ရောက်တဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ၊ ဒဏ်ရာ အချို့ကို ကုသရင်း ချက်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်ဆင်းမယ်လို့ ဖွင့်ဟ သွားခဲ့သလို ၊ နောက်ထပ် ထိုးသတ်မယ့် ပွဲစဉ်တွေကိုလဲ ဒီဇင်ဘာ (သို့) ဇန်န၀ါရီ လထဲမှာ ထိုးသတ်သွားချင်တယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ပြောဆိုမှုကြောင့် One Championship ဥက္ကဌကြီး ချက်ထရီ ကတောင် ပြုံးပြသွားခဲ့ပြီး ၊ ဒီလို ဖိုက်တာမျိုး နဲ့ လက်တွဲခွင့်ရတာ သူ့အတွက် အရမ်းကို ကံကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ အကြည့်တွေ နဲ့ တုန့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် စဉ်းစား စရာ ကောင်းတာ ဟဲဗီးဝိတ်တန်း က ချန်ပီယံ ဆင်းထိုးတာတောင်2ချီနဲ့ အပြတ် ဖြတ်ထားပြတဲ့ အောင်လ အန်ဆန်း လို ဖိုက်တာမျိုးကို ဘယ်သူက မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာ စိန်ခေါ်ရဲမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက စိတ်ဝင် စားစရာပါ။
ယခင် စိန်ခေါ်ပွဲတွေ တုန်းကလဲ ဟာဆီဂါဝါ က နှစ်ကြိမ် ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း မှာ မင်းမူနေတဲ့ ခရာကီ က တစ်ကြိမ် လာစမ်းကြပေမယ့် ၊ အောင်လ ကို အနိုင်ယူပြဖို့ က ဘယ်လိုမှကို နီးစပ်မှု မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် One Championship အနေနဲ့ ဒီတစ်ခါ အောင်လ ထိုးချင်တဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း က ပြိုင်ဘက်ကို ရှာရတာ အခက်အခဲတွေ အနည်းငယ်တော့ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောင်လ ရဲ့ နေရာမရွေး ၊ ကွင်းမရွေးပဲ နိုင်ပွဲ ဆက်နေတဲ့ အရှိန်အဟုန်ကိုလဲ ပြိုင်ဘက်တိုင်းက စိုးရိမ်နေကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ အောင်လ အန်ဆန်း ဟာ အာရှ ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်း ဖိုက်တာ တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
One Championship ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ထဲမှာတော့ Mark of Greatness အမည် နဲ့ မလေးရှား နိုင်ငံက ဘူခစ်ဂျလီ မှာ နောက်ထပ် ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ၊ အကယ်၍ ဖိုက်တာ ပြိုင်ဘက် ပေါ်လာခဲ့တယ် ဆိုရင် အောင်လကတော့ အဲဒီပွဲမှာလဲ ထိုးချင်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဗီရာကို အနိုင်ယူတဲ့ ပွဲအပြီး အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ အောင်မြင်မှု နဲ့ ကမ္ဘာကျော် သတင်းဌာနတွေ ဖြစ်တဲ့ ESPN , Yahoo Sports, The Sun တို့က ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ တစ်ခမ်းတနား ဖော်ပြခဲ့သလို ၊ MMA အသားပေး သတင်းဌာနတွေကလဲ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားပေါင်း များစွာ နဲ့ ဒီကနေ့မှာ ရေးသား ဖော်ပြလျှက် ရှိနေပါတယ်။